यस्ता छन् राष्ट्रियसभा उम्मेदवार – Sajha Bisaunee
यस्ता छन् राष्ट्रियसभा उम्मेदवार
। १७ माघ २०७४, बुधबार १५:४६ मा प्रकाशित
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर ६ बाट १२ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । यस प्रदेशका १० जिल्लाबाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धन र नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । माघ २४ गने हुने यो निर्वाचनमा पूर्व जिल्ला पञ्चायतका सदस्यदेखि द्वन्द्वका घाइतेहरूसमेत चुनावमा भिड्दै छन् ।
यति मात्रै होइन्, संविधानसभाका पूर्व सदस्यदेखि पूर्वशिक्षक पेशा सम्हालेका व्यक्तिहरू पनि यो निर्वाचनमा होमिएका छन् । वि.सं. २०२९ सालमा तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतको सदस्य भएका विष्णुबहादुर शाहीले नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । २०५२ सालदेखि राजनीति सुरु गरेका शाहीले २०३४ सालमा जुम्लाबाट कालिकोटलाई अलग जिल्ला बनाउन भएको आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए । सक्रिय राजनीति गरेका वापत आफूले यो पटक राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बन्ने मौका पाएको उनी बताउँछन् । राष्ट्रियसभाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए कर्णाली क्षेत्रका समस्यालाई प्राथमिकता दिने उनको योजना छ । उनी लामो समयदेखि कांग्रेसमा राजनीति गरिरहेका छन् ।
२०५२ सालमा भूमिगत भएका कालिबहादुर मल्ल पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका छन् । भूमिगत हुँदा यनले तीन वर्ष माओवादी सेनाको पोल्ट्रीकल कमिसार (विभाग प्रमुख) भएर काम गरे । माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवारी दिएका उनले २०४७ सालदेखि राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए । मल्लसँग जिल्ला विकास समितिका सदस्यदेखि पहिलो संविधानसभा सदस्य भएर काम गरेको अनुभव छ । २०२४ सालदेखि २०४३ सालसम्म शिक्षक पेशामा आवद्ध भएका जाजरकोटका मल्ल निरन्तर माओवादी पार्टीमा सक्रिय छन्् । पहिलो संविधानसभा सदस्य हुँदा आफूले बनाएका दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि उम्मेदवारी दिएको उनले बताए ।
सामान्य दलित परिवारमा जन्मिएका मित्रलाल सार्कीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । सल्यानका बासिन्दा मित्रलालको राजनीतिमा यात्रा २०११ सालदेखि सुरु भएको हो । उनी २०७० सालमा कांग्रेसको जिल्ला सदस्य भएका थिए । कांग्रेसको जातिय संगठनका रूपमा रहेको दलित संघको जिल्ला सभापति भएका उनले संघको क्षेत्रीय नेतृत्वमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय महाधिवेशन सदस्यमा रहेर पटक–पटक आफूले नेतृत्व गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘निकै थिचोमिचो सहेर बसियो, निरन्तर कांग्रेसको राजनीतिमा लागियो । अब जनताका पक्षमा काम गर्नेछु ।’ राष्ट्रियसभामा आफूले नेतृत्व गर्ने अवसर पाए दलितको पक्षमा काम गर्ने उनको भनाइ छ ।
वि.सं. २०४९ सालमा रुकुमको साविक खोलागाउँ गाउँविकास समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका गोपालप्रसाद शर्मा पनि राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार हुन् । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अपाङ्गको कोटामा उम्मेदवारी दिएका शर्माले २०४७ सालबाट राजनीति सुरु गरेका हुन् । २०२६ सालदेखि २०३५ सालसम्म शिक्षण पेशामा संलग्न शर्मा १० वर्षे युद्धको क्रममा माओवादीले आँखामा तेजाव हालेपछि अपाङ्ग भए । हाल उनी दुवै आँखा देख्न सक्दैनन् । तर राष्ट्रियसभामा आगामि नेतृत्व लिएर अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने उनको अठोट छ । यस्तै मुगुकी सूर्यदेवी मल्लले राष्ट्रियसभाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए समग्र कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि काम गर्ने बताइन् । कांग्रेसको महिला कोटाबाट उम्मेदवारी दिएकी सूर्यदेवीले २०४८ सालदेखि राजनीति सुरु गरेकी हुन् । २०५० सालमा कांग्रेसको साधारण सदस्य भएकी उनीले नेविसंघको सदस्यदेखि गैर–सरकारी क्षेत्रमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । उनले २०६६ देखि २०७० सम्म मुगुमा कांग्रेसको कार्यवाहाक जिल्ला सभापतिसमेत भएर जिम्मेवारी निर्वाह गरेको बताइन् ।
यस्तै कालिकोटका नरपति लुहार पनि नेकपा एमालेबाट राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार हुन् । २०४७ सालमा एमालेमा आवद्ध भएका नरपतिले पञ्चायतको समयमा २०४४ सालमा साविकको फुकोट गाविसको उपप्रधानपञ्चको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । एमालेमा रहेर निरन्तर राजनीति गरेका उनी २०५४ सालमा वडा अध्यक्ष भएका थिए । उनले हालसम्म चार पटक नेकपा एमाले जिल्ला कमिटीको सचिवालय सदस्य, उत्पीडित जातीयमुक्ती समाजको जिल्ला सदस्यदेखि संयोजक भएर दलितका क्षेत्रमा काम गरेका छन् । द्वन्द्वकालमा आठ वर्ष भारत बसेका
उनले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा विजयी भएपछि नेपाली जनताका लागि काम गर्ने जनाएका छन् । वि.सं. २०५२ सालमा माओवादीमा आवद्ध भएका कालिकोटका जीवन बुढा पनि उम्मेदवारका रूपमा खडा भएका छन् । माओवादीमा गाउँ कमिटी, ईलाका हुँदै छापामार हुँदै माओवादी सेनाको नेतृत्व सम्हालेका उनले बताए । द्वन्द्वताका उनले जनमुक्ति सेवाको प्लाटुन कमाण्डर, लिड कमाण्डर र डिभिजन कमाण्डर पदमासमेत पुगेका थिए । सेना समायोजन पछि उनी दलको पोलिटब्यूरो सदस्य भएर राजनीतिक जीवन बिताइरहेका छन् ।
यस्तै एमालेबाट सुर्खेतकी नन्दा चपाईं, अन्यमा रुकुमपश्चिमका ठगेन्द्र पुरी र जाजरकोटका भैरवसुन्दर श्रेष्ठले पनि उम्मेदवारी दिएका छन् । माओवादी केन्द्रबाट मुगुका युटोन तामाङ्गले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । यो प्रदेशमा रहेका ५४ वटा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी एक सय आठ तथा २५ वटा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी ५० जनाले मतदान गर्न पाउनेछन् । यस्तै प्रदेशसभा सदस्यमा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित २४ र समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने १६ जना गरी ४० जना सांसदले पनि मतदान गर्नेछन् । ६ नम्बर प्रदेश निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार राष्ट्रियसभाका सदस्य छनौटका लागि यो प्रदेशमा जम्मा एक सय ९८ जनाले मतदान
गर्नेछन् । १२ जनाले उम्मेदवारी दिएको भए पनि आठ जना मात्र निर्वाचित हुनेछन् ।